धर्म/दर्शन – jyotishsathi – News & Entertainment धर्म/दर्शन – jyotishsathi – News & Entertainment
हिन्दु धर्म अनुसार देवताका गुरु बृहस्पति हुन् भने दैत्यका गुरु शुक्राचार्य हुन् । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार प्रत्येक वर्ष शुक्र अस्त र बृहस्पति अस्त हुने गर्दछ । वर्षको एक समयमा घुम्दै जाने क्रममा शुक्र ग्रह पृथ्वीनजिक पुगेपछि…
अहिले जाडो याम छ । यतिबेला मर्निङ वाकमा निस्कनु त्यती अनुकुल हुँदैन, खासगरी काठमाडौंमा । चिसोमा मर्निङ वाक गर्दा फाइदा होइन बेफाइदा गर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ । यस्तो बेला घरभित्रै बसेर योग गर्न सकिन्छ ।…
१५ मङ्सिर, काठमाडौँ । गत चैतदेखि बन्द रहेको श्री पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस १ गतेदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिने भएको छ । भौतिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर पुस १ गतेदेखि मन्दिर खोल्ने…
काठमाडौं : नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११:३७ बजे दिएको छ। मङ्सिर १ गते मध्याह्नकालमा टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साइत खोज्नेका लागि मकर लग्न, वृष नवमांश, अभिजित् मुहूर्तको शुभसाइत दिइएको…
धार्मिक रुपमा महत्वपुर्ण दिन -आकाशदीपदान, तुलसी पूजा शुरु हुँदै
आकाशदीप दान, कार्तिक स्नान र तुलसी पूजाःसौभाग्य, सम्पत्ति एवं श्रेय प्राप्ति १५ कात्तिक, पोखरा प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन शुरु हुने आकाशदीपदान एवं तुलसीको विशेष पूजाराधना आजदेखि शुरु गरिँदैछ भने कार्तिक स्नान पनि आज…
तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? यदि छ भने तपाईंले राशिसँग…
जेठ १७ गते राती बाह्र बजेर १८ मिनेट बाट शुक्र अस्त हुदैछन् । शुक्र ९ दिन सम्म अन्धो रहन्छ । यस्को प्रभाव जेठ २६ गते सकिनेछ । शुक्र भनेको हाम्रो भोकबिलासिता,मनोरञ्जन, कलाकारिता, बिज्ञानसँग सम्बन्धित ग्रह…
हिन्दु शास्त्र अनुसार हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले हरेक शुभ कार्य गर्दा शुभ मूहूर्त हेर्ने परम्परा रहेको छ । शुभ कामको लागि शुभ साइत जुराएर कामको सुरुवात गरे सफल हुने धार्मिक मान्यता रहेको कारण साइत जुराउने चलन रही…